TAN FACAASAN HAAMMACHUUN, SEERA UMAMAATI ! -
Umamni hundi seera qaba. Seerrii Qabu ka Namaa miti. Kan Waaqaati. Waan Seera Umamaa keessa jiru, Namni waa gochuu hin danda’uu. Yoo yaalellee badiima isaa labsata. Seera Umamaa kanaaf Oromoon bakka ol aanaa qaba. Oromoon kaleessa qilleensumarra Aadaa fi Seenaa kkf qofa jedhee fiigaa turee fi Oromoo Umamasaatti deebi’uuf qabatamaatti sochii taasisaa jiru gidduu garaagarummaa jiru wayita ilaalluu , Seera Umamaa guutuun hangama akka nama ykn saba tokko tokkummaan jabeessu arguu dandeenya.Seera Umamaa jechuun bu’ura walii galtee waa hundaa jechuudhaa. Nama dhuunfaa kaasee hanga sabaatti ka jiru, waan Seera Umamaa irratti wal hubannaan , wal ijaaruu fi kaayyoo walii galaa kewwachuuf bu’ura ta’uufii danda’aa ykn waan isa danquu hin jiru. Maqaa Tokkummaan Saboota 87 mitii, saba tokkoyyuu walitti fiduun haalaan ulfaataadhaa. Carraan jiraatus yaaluurra ka dabruu miti. Kanaaf Seera Umamaatti warri amanan walitti dhufnaan , Saboonni 1000 iyyuu yaada ka’umsaa tokko qabaachuu waan malaniif, achirratti wal ijaaruun ni salphata. Dhibee guddaan Biyya Itoophiyaa jedhamtuu fi humnoota habashaa kanadha. Dhibee kanatu kan hammatan isaan haamsiisuuf foolachaa jira.Wanni tokkummaa Itooophiyaa isaan baanan gaaffii jala galchuu isa kana.
Seera Umamaa facaasanii haammachuu keessa waan dhalli namaa hin jijjirree utubaa 5tu jira. 1. Midhaan Biqiluuf Biyyeen walitti dhufuu , 2. Biyyee keessaa biqiluu, 3.biqiluu amma haammachuutti yeroo jiru , 4. Firii kennuuf yeroo jiru , 5. Haammachuuf yeroo jiru. Shanan kana eeguun dirqama. Kana Umama ykn waaqayyoo ykn Rabbii qofaatu raawwata. Firii laachuun dura biqiluu, biqiluun dura facaasuu kkf dirqama . Akkuma kana Bilisummaanis adeemsa mataa isaa qaba. Bilisummaa dura Tokkummaa, Tokkummaa dura Umama ofiitti deebi’uu ykn hundee tokkummaa godhachuu. kun osoo hn guutiin galii bira ga’uun hin jiru. Kanaaf muratanii kana guutuu malee abdii kutachuun gonkumaa hin barbaachisu. Miidhaan facaasanii haammachuu keessa, aramaan, balaan, waan akka tasaa fi kkf akkuma jiran, Qabsoo keessas ni jiru. Midhaan sana haammatanii facaasuuf kunuunsaa fi of eeggannoon akkuma godhamuu qabsoo keessatti kana raawwatanii galii ga’uun waan jiraati. Biqiluu fi firiin waan uumani nama kennu. Bilisummaas waan Uumaa ykn waaqayyoo ykn Rabbi namaaf kennu.